SEENAA Y.G (2005) 05/03/2017
Beektoota keenyas ta’uu, akitivistoota farnjii jalaa qara’aniis haa ta’aanii, qabsaa’oonni kaleessaa fi kkf , bakka kudhan kan isaan dhaabee jiru , dhiigumaan Oromoo ofiin haa jedhan malee, aadaa fi jireenyi isaanii guutuun Habashummaadhaa. Dhukkuba kaansarii Habashumaatu isaan galaafataa fi salphisaa jira. Jarri biyya alaa of gawwamsituu kunneen, qabsoo Biyya keessaa irratti miidhaa tokkollee hin fidan. Maaliif jennaan Biyya keessaa dhukkuba habashummaan kan hammacamu gonkumaa waan hin jirreef. Addatti ABOn dhalootaa kaasees ta’uu adeemsa qabsoo isaa keessatti, warra dhukkuba kaansarii habashummaan maraatan of keessaa harcaasaa, warri dhukkuba habashummaan dhukkufatan keessaa ganaa fi ba’aa, har’a xaliila’aa waan jiruuf, Itoophiyaan habashumman yaaddofnuuf , Itoophiyaan haal habashootaa tikisuu fi abbaa biyyaa baadiyyaatti yaasuuf karoorfattee hojjachaa jirtu dhuma ishe ta’uu mirkaneessaa jiraachuun shakki hin qabu.
Mooraa qabsoo Oromoo kana booda amala habashummaan faalamuun isaa dhumataa deemuun murteessaadhaa. Qeerroon Oromoo gonkumaa amalaa fi dhukkuba habashummaan hammacamee, kaayyoo isaa irraa hin jallatu. Kan hedduu nama gaddisiisuu, beektoonni fi akitivistoonni keenya biyya keessaa yaa’anii Biyya alaatti dhukuba kaansarii habashummaan qabamanii wal nyaachuu fi wal salphisuun isaanii hedduu nama gaddisiisa. Dhiiga habashummaan faalamee gonkumaa fayyaa hin qabaatu. Aadaan habashummaa obboleyyan garaa walitti jabeessa. Hamilee fi ofittummaan guutamee gonkumaa dhiiga isaaf hin tolu. Dhiiga isaaf obsa dhabee, halgaaf jilbeenfachiisa. Fira isaa harka qabuu irra , halgaa gatiititti baachuu filsiisa. Habashummaan dhukkuba kaansarii hamaa namoota keenya miidhaa jiruudhaa.
HORAA BULAA !!!!!!!!!!!!!!!